Dubai - Tunis izao isan'andro ao Emirà
Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Dubai - Tunis izao isan'andro ao Emirà
Nanamafy ny fanolorantenany an'i Tunis ny Emirates tamin'ny fampitomboana ny faharetan'ny sidina manelanelana an'i Dubai sy Tunis manomboka amin'ny enina ka hatramin'ny fito isan-kerinandro manomboka ny 30 Oktobra 2017.
Ny sidina Dubai - Tunis fanampiny dia hiasa isaky ny alatsinainy miaraka amin'ny fiaramanidina Emirates Boeing 777-300ER manolotra efitrano manokana tsy miankina miisa valo ao amin'ny Kilasy Voalohany, seza 42 fisaka lainga ao amin'ny Class Business ary efitrano malalaka hialana sasatra amin'ny Economy Class miaraka amin'ny seza 310. Ny sidina fanampiny dia hanome ny mpandeha any Tunis hiditra bebe kokoa amin'ny tambajotram-pifamoivoizana manerantany an'ny Emirates, indrindra ny toerana any Moyen Orient, GCC, Azia Andrefana, faritra Azia Pasifika ary Etazonia, miaraka amina fijanonana tokana any Dubai.
Ny fatra matetika dia hanolotra mpanafatra sy mpanondrana entana fanampiny 23 taonina isaky ny lalana. Ny entana malaza entina eo anelanelan'ny Tunis sy Dubai dia misy voankazo sy legioma, hazan-dranomasina vaovao sy mangatsiaka, fitaovana elektronika, truffle ary daty.
Eo amin'ny lohasahan-dranomasina Mediteraneana lehibe, ao ambadiky ny farihin'i Tunis sy ny seranan-tsambon'i La Goulette, Tunis dia toerana malaza ho an'ireo mpandeha iraisampirenena miaraka amin'ireo toerana nolovaina sy fomba amoron-tsiraka. Izy io dia malaza amin'ny tranombakoka, souk taloha ary kolontsaina miroborobo. Ny toerana mafana an'ny mpizahatany dia misy an'i El Djem, fantatra amin'ny hoe rindrin'ny amphiteater romana mahery; Sidi Bou Said, toerana misy kanto hita eo an-tampon'ny hantsana mideza ary tazana ny Ranomasina Mediteraneana; sy Carthage, mpifaninana lehibe tany Roma taloha. Ho an'ireo mpizahatany mitady fialofana amoron-dranomasina, Hammamet sy Djerba dia manolotra fasika amoron-dranomasina mahafinaritra. Sousse dia faritra fizahan-tany manan-danja iray izay mandray mpitsidika an-tapitrisany isan-taona izay mankafy ny hotely, trano fisakafoanana, clubclub, trano filokana, morontsiraka ary fotodrafitrasa ara-panatanjahantena.
Hatramin'ny Oktobra 2006, rehefa natomboka ny serivisy voalohany ho an'i Tunis, dia nitondra mpandeha iray tapitrisa mahery sy entana maherin'ny 60,000 taonina i Emirates ankehitriny. Maneran-tany, ny zotram-piaramanidina dia mampiasa teratany Toniziana 500 mahery amin'ny andraikitra isan-karazany manerana ny Emirates Group, ao anatin'izany ny ekipazy 200 mahery.
Fizahan-tany any Shina any Thailand: mihoatra ny Pandas